nabad – Garanuug
Home / Tag Archives: nabad
Tag Archives: nabad
February 29, 2016	Sheeko Gaaban 0 5,071
“Haye, haye, aynu ismaqalno,” ayuu yiri Macallin Nuur. “Waa faaqidaaddii suugaanta.” Tobankiisii arday waxay la soo baxeen buugtoodii Suugaanta Af-Soomaaliga. Waxaa albaabka ka soo galay Qasaaye oo neef-tuuraya, dhididkuna ka dareerayay. “Qasaayow waqtiga dhowr,” ayuu yiri Macallin Nuur. “Waad soo daahday.” “Macallin, gabar i jecelaa isbaaro ii dhigatay,” ayuu Qasaaye ...
Xalku Waa Isbeddel Shacab
January 18, 2016	Aragti 0 4,455
Soomaali baynu nahay. Doorashada 2016 baynu hadal heynaa. Sannadku wuu isbeddelay. Fikirkaayaguse isma uusan beddelin. Saas ay tahayna waxaynu u ololeynaa in isbeddel lagu sameeyo Madaxtooyada. Misana hankaayagu ma dhaafsiisana inaynu ku il doogsanno un qof nagu qabiil ahoo ku fariisto kursiga Madaxtooyada. Sabir iyo bisayl siyaasadeed waynu ka arradan ...
December 21, 2015	Sheeko Gaaban 1 7,780
“War kaas aniga laxna kuma aamineen,” ayuu lahaa Oday dhex fadhiyay makhaayad laga shaaheeyo. “Tolku way ku qasaareen. Cadowgiisa ma yaqaanno.” Waxaa isla markiiba makhaayadda soo galay nin Saalax la yiraahdo. “Waa doqonkaan Saalax oo kale,” ayuu yiri Odaygii. “Kanna cadowgiisa ma yaqaanno.” “Adeer hee?” ayuu la soo booday Saalax ...
Guulihii Kacaankii 21 kii Oktoobar 1969
October 25, 2015	Taariikh 1 15,630
Saraakiishii afgembiga ka dambeeyey waxay ahaayeen 25 nin oo 20 ka tirsanaayeen Ciidamada Qalabka Sida (CQS), 5 ta kalena ahaayeen Ciidamada Bilayska. Waxaa la sameeyey gole ka kooban 25 kan oo loogu magac daray Golaha Sare ee Kacaanka. In kasta oo Maxamed Siyaad Barre watay qorshaha afgembiga, haddana waxay qabteen ...
October 6, 2015	Abwaan 0 4,074
Waa abaalmarin sannadle ah oo loogu magac daray Alfred Nobel oo ahaa ninkii aas-aasay. Alfred Nobel wuxuu ahaa saynisyahan iyo muhandis u dhashay dalka Sweden. Wuxuu lahaa warshad hubka samaysa, waana ninkii hinsiday walaxda qaraxda ee dhaaynamaayt (miino), oo lagu jabiyo dhagaxa iyo wixii la mid ah, sida marka ceelasha ...
March 30, 2017	202,309